September 2014 | ပျူနိုင်ငံ
နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ မတူတဲ့ အုပ်စုတွေကြား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူရှစ်ဆယ်ကျော်သေ
ကာတွန်း ATH ရဲ့ စိုက်ကြပြန်ပြီ …
ဆုံနေရက်နှင့် ဝေးလေခြင်း ...
၁၀ ပေခန့်ရှည်လျားသည့် စပါးအုံးမြွေကြီး ဒဂုံမြို့နယ်တွင် ဖမ်းမိ
"နံနက်အလင်းအောက် ပျောက်ရှတတ်ကုန်သော အိပ်မက်တို့သည်…"
သုံးရက်တိုက်ပွဲ ( သို ) ရွှေပိုးလေးကို ကြိုဆိုခြင်း
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲ Haze မဝင်အောင်ကာကွယ်ကြမယ်။
ဒယ်ဒီနှင့် သူ၏ ဖုန်းလိုင်းများ
ရေးသူ- (မ)ဂျူ လီယာစော
မြန်မာပြည်တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းများ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရလာသော ခေတ်၌ အဖေ့မှာလည်း မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးရှိလေ၏.. ထိုအခါ သမီးသည် အဖေ့ဖုန်းနံပါတ်အား Dad Mobile ဟု မှတ်ထားလိုက်၏.. အရင်က သမီးဖုန်းဆက်ချိန် အိမ်တွင် စောင့်တတ်သော အဖေသည် "သမီးဖုန်း လာရင် ဟန်းဖုန်းကို ဆက်ခိုင်းလိုက်ဟေ့" ဟု မှာကာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး လည်ပတ်နေနိုင် လေသည်.. တခါသော် အဖေသည် အိမ်မှာ မရှိ.. သမီးဖုန်းဆက်သော် အမေကလည်း ညည်းအဖေကို ဟန်းဖုန်းသာ ဆက်ပါအေ ဆို၏.. သို့သော် ထိုဟန်းဖုန်းကိုလည်း ဆက်မရ.. အိမ်ကို တခါပြန်မေးခါမှ အမေက အေး.. သမီးအဖေ ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ဝယ်ထားတယ်.. လိုင်းပိုကောင်းလို့တဲ့ဟု ဖြေလေ၏.. သမီးလည်း Dad Moblie2ဟု မှတ်ရပြန်၏.. ဖုန်းဆက်သည့်အခါတိုင်း အိမ်ဖုန်း ဟန်းဖုန်းနှစ်လုံးနှင့် ချာလပတ်လည်နေစဉ် အင်တာနက်နှင့် စမတ်ဖုန်းများ အဖေတို့နေထိုင်ရာ မြို့လေးတွင် တွင်ကျယ်လာ၏..
အဖေကား ခေတ်မီသူပီပီ facebook, google hang out, skype, viber တို့မှတဆင့် သမီးနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အင်တာနက်ချိတ်ထားသော စမတ်ဖုန်းနှင့် အင်မတန်ဟန်ကျနေလေ၏.. အရင်လို သမီးထံမှ ဖုန်းလာချိန်စောင့်ရန် မလိုတော့.. တရေးနိုးလျှင် viber မှ message ပို့၍ ရ၏.. ဖုန်းဆက်ပြန်တော့လည်း အရင်ကထက် ဖုန်းဖိုးသက်သာ၍ သမီးကလည်း သဘောကျ၏.. ထိုကြောင့် နံပါတ်အသစ်အား Dad Internet Phone ဟု မှတ်ထားလိုက်၏.. အဖေသည် facebook တွင် သမီးတင်ထားသော status များဖတ်ကာ သမီးစိတ်အခြေအနေကို သိရ၏.. ပြောချင်တာကို comment ပေး၍ ရ၏.. ဓာတ်ပုံများကို အလွမ်းပြေ ဝင်ကြည့်နိုင်၏.. တခါတွင်ကား သမီးဆော့သော ဂိမ်းများကို ဟိုလိုမလုပ်ဘူးလား ဒီလိုလုပ်ပါလား အကြံပေးမိရာ သမီးက စိတ်ဆိုးလေ၏..
ထိုသို့ အဆင်ပြေသည် ထင်ရသော်လည်း အဖေ့ကို ဒုက္ခပေးနေသည်မှာ MPT ၏ connection ဖြစ်၏.. စကားပြောရင်း လိုင်းကျကျသွားရာ ခဏခဏ ပြန်ခေါ်ရသဖြင့် သားအဖနှစ်ယောက်လုံး စိတ်မရှည်..
ထိုစဉ် MPT နှင့် အပြို င် ooredoo ပေါ်လာရာ လိုင်းပိုကောင်းသည် ဆိုသဖြင့် ooredoo တစ်ကတ်ဝယ်လိုက်ရပြန်၏.. သမီးလည်း ဖုန်းမှတ်စုထဲတွင် Dad ooredoo ဟု မှတ်လိုက်ရပြန်၏.. လိုင်းအခြေအနေကား ထူးမခြားနား.. အဖေ့ အိတ်ထဲမှ ငွေယားကလေးများကမူ ပျော်ပျော်ကြီး ထွက်သွားကြသည်.. မကြာပါချေ Telenor ပေါ်လာပြန်၏.. အစမို့လား မသိ.. လိုင်းကောင်း၏.. သမီးဆီ message ပို့သော် မပြန်.. connection ကောင်းချိန်မို့ သမီးကိုလည်း ခပ်နောက်နောက် ရေးမိရာ တဖက်မှ သမီးသည်လည်း ဘယ်သူများ ငါ့ကို တရင်းတနှီးစနောက်နေပါလိမ့်ဟု တွေးကာ ဦးနှောက်ခြောက်နေလေ၏.. နောက်မှ အဖေလား ဘယ်သူ့ဖုန်းလဲဆိုသော် yes, testing with telenor sim card ဟု ဆိုသဖြင့် Dad Telenor ဟု မှတ်လိုက်ရပြန်၏..
တခုသော တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အဖေသည် ဖုန်းသုံးလုံးချကာ viber မှတဆင့် သမီးအား ဖုန်းခေါ်လေသည်.. ပထမ ooredoo နှင့် ခေါ်၏.. စကားပြောရင်း ပြတ်သွားရာ telenor နှင့် ထပ်ခေါ်၏.. သမီးဖုန်းကား မအားတော့.. တဖက်၌ သမီးက ooredoo ဖုန်းအား ပြန်ခေါ်နေသောကြောင့်ပင်.. စိတ်မရှည်သော အဖေသည် ဒါ လိုင်းမကောင်းလို့ ဖြစ်ရမယ်ဆိုကာ မူလလက်ဟောင်း MPT နှင့် ခေါ်၏.. ထိုစဉ် သမီးသည် Dad Telenor မှ missed call များ တွေ့သဖြင့် ပြန်ခေါ်ရာ အဖေကား တဖက်တွင် MPT နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေသဖြင့် ဖုန်းမကိုင်အား.. သမီးသည် အဖေ့ internet phone မှ missed call များ မြင်သော် ဒေါပွ၏.. နောက်ဆုံး အဖေ.. ဘယ်ဖုန်းနဲ့မှ မခေါ်ပါနဲ့.. သမီးခေါ်ပါမည်.. ခဏစောင့်ပါဟု ဖုန်းနံပါတ်သုံးခုလုံးကို message ပို့ကာ စောင့်ခိုင်းရ၏.. အဖေက ခေါ်ကြည့်ချင်တာဆိုသော် သမီးက စောင့်ရပြန်၏.. သို့သော် ဝင်ချင်တဲ့ဖုန်း ဝင်ဟုဆိုကာ ဖုန်းနံပါတ်သုံးခုမှ တပြို င်တည်းခေါ်သဖြင့် သမီးမှာ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပဲ ရှိတာနော် အဖေဟု ခဏ ခဏ သတိပေးရ၏.. ဤသို့ဖြင့် ထိုတနင်္ဂနွေသည်ကား အဖေနှင့်သမီး ဖုန်းခေါ်ရာ ကျလိုက်ပြန်ခေါ်လိုက်ဖြင့်ပင် တရက်လုံး ကုန်လေသတည်း ...
(မှတ်ချက်။ ။“ဒယ်ဒီနှင့် သူ၏ ဖုန်းလိုင်းများ” ဆိုသည့် အမည်မှာ စာရေးသူ (မ)ဂျူ လီယာစော၏ စာသားများအပေါ် ကျနော့်ဘာသာ ပေးထားသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါသည် ... -ကိုအောင်)
Posted by ကိုအောင် at 20:330comments
ပြည်ပရောက် သားသမီးတွေ ဘယ်လို ရုန်းကန်နေရသလဲ
အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်က Moorefield ဆိုတဲ့ မြို့ကလေးကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ တောင်ပတ်လမ်းကြားတွေက မမှောင်ခင်မောင်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။ လမ်းတွေကလည်း ကျဉ်းသလို၊ ဖုံး service တွေကလည်း အဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲကို ရောက်သွားတာနဲ့ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ဒီကြားထဲ တည်းခိုတဲ့နေရာမှာ အင်တာနက်ကလည်း မရဆိုတော့ တော်တော်လေး ကသိကအောက်နိုင်သွားတယ်
တခုတော့ ရှိပါတယ်။ တခါတလေ၊ အင်တာနက်မရှိ။ ဖုံးမပြောဖြစ်တော့ လူတွေရဲ့ ဘဝကို လေ့လာချိန်ပိုရတာပေါ့။ သူတို့ နဲ့ စကားပြောကြည့်တိုင်း မြန်မာပြည်ထဲက လူတွေထံ အမေရိကား ရဲ့ အဖြစ်မှန်တွေ၊ လူတွေရဲ့ တကယ့်ဘဝတွေကို ပြန်ပြီး ရှင်းပြချင်တယ်။
ဒီလိုဗျ။ မြန်မာပြည်ထဲက လူတွေက ရုပ်ရှင်တွေကြည့်၊ ဖေ့ဘွတ်ထဲက ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး နိုင်ငံခြားက လူတွေကို အကဲဖြတ်မှားကြတယ်။ ဒီမှာက ခင်ဗျားတို့ထင်သလို၊ နက်ကတိုင်တွေ၊ ကုတ်အင်္ကျီတွေ အမြဲတမ်းဝတ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။
မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ မှာက လူပေါင်းစုံလေ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ သူတွေ၊ ပညာရေးကို ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ ထိုင်းနယ်စပ်ထွက် အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ နောက်တော့-- ဒုက္ခသည် အဖြစ် နဲ့ အမေရိကားကို ရောက်လာကြ၊
ရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကြပြီး၊ အိမ်ကို ထောက်ပံ့ကြတယ်။
ထောက်သာ ထောက်ပံ့ရတယ်။ သူတို့ခင်ဗျာမှာလည်း မပျော်ရှာကြပါဘူး။
ကျွန်တော့ဘေးက တိုင်းရင်းသူလေးဆို၊ " အမရယ် ငါတို့က ပိုက်ဆံကို သစ်ပင်ပေါ်က ကြွေကျတဲ့ သစ်ရွက်တွေ ကောက်ရသလို လိုက်ကောက်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာ အရမ်းပင်ပင်ပမ်းပမ်းလုပ်ပြီးမှ ပို့နိုင်တာ" တဲ့။
မြန်မာပြည်က မိသားစုကလည်း ငွေက အမြဲလိုနေတာကိုး။
လစဉ် (၃-၄) သိန်းပေးလည်း မလောက်၊
လူလတ်တန်းစား မိသားစုတစုအတွက် (၁၀-၁၂) သိန်းလိုတယ် လို့ ဆိုတယ်။
ပြဿနာက ဒီမှာ ကြုံရာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေအတွက် တလတလ အဲ့သလောက် ပိုဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒီမြို့ကလေးမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပါ။
ကြက်သတ်စက်ရုံမှာ အလုပ်စဝင်ပြီ ဆိုရင် တနာရီ (၉) ဒေါ်လာခွဲ နဲ့ စ ရကြတယ်။
တပတ်ကို နာရီ (၄၀) ဆိုပါစို့။ အခွန်ပေးပြီး ဘာအပြီး ဆိုရင် တပတ်ကို (၃၀၀) ဝန်းကျင်လောက်ရကြတယ်။ တလ ဒေါ်လာ (၁၂၀၀) ရမယ်။
အချိန်ပိုတွေ ဘာတွေဆင်းလို အိုဗာတိုင်ကြေးရပြီ ဆိုရင် တလ (၁၆၀၀- ၂၀၀၀) လောက်ရတယ် ဆိုမယ်။
အိမ်လခတွေ၊ အသုံးစရိတ်တွေ နှုတ်လိုက်ရင် တလမှာ ဒေါ်လာ (၁၀၀၀) ပိုဖို့ မနည်းလုပ်ယူနေရတယ်။
ဒီမြို့က နယ်မြို့မို့လို့။ အိမ်လခ နဲ့ တခြားကုန်ကျစရိတ်က ဈေးသက်သာတာလေ။
မြို့ကြီးတွေမှာ နေမယ် ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်က အနည်းဆုံး တလ ဒေါ်လာ (၃၀၀၀) လောက်ရမှ လောက်မယ်။
တနှစ်ကို ဒေါ်လာ (၁) သိန်းရတယ် ဆိုအုံး၊ ဝင်ငွေကောင်းရင် အခွန်ပိုများလာမယ်။
ဆိုတော့ တလတလ မြန်မာပြည်က သူတွေ တွက်ပြတောင်းဆိုနေသလိုမျိုး
နိုင်ငံခြားက လူတွေက ထောက်ပံ့နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ( ဝင်ငွေကောင်းတဲ့သူ တချို့က လွဲရင်ပေါ့)
မြန်မာပြည်ရဲ့ လူနေမှုစရိတ်၊ ကုန်ဈေးနှုန်း ၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေတွေကို ပြင်နိုင်မှသာလျင်၊ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူမှုရေးအကြပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။
မဟုတ်လို့ကတော့ နိုင်ငံခြားကနေ မိသားစုအတွက်ထောက်ပံ့တဲ့ငွေကလည်း၊ ဆင့်ပါးစပ် နှမ်းပက်သလိုမျိုးဖြစ်၊ မလောက်တော့ ထပ်တောင်း၊ ဒီဘက်က လူတွေကလည်း ဖိစီးမှုပေါင်းများစွာ နဲ့ အလုပ်လုပ်ရ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မချောင်၊
" မြန်မာပြည်ကို ငွေပို့တဲ့အခါတိုင်း မပျော်ရပဲ နဲ့ စိတ်ညစ်ရတယ်" လို့ ပြောပြောနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို မြင်တိုင်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ၊ ဖိစီးမှုတွေ၊ အသက်ခိုးရှူနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက အများကြီးပါ။
ပြည်သူလူထုရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ခေါင်းဆောင်ပီသစွာ တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အစိုးရတရပ်လို မျိုး ပေါ်ပေါက်လာမှသာ အသက်ရှူချောင်ပါလိမ့်မယ်။
မဟုတ်လို့ကတော့ ဆေးရုံပေါ်က လူနာကို သွားကူညီလိုက်၊
လူနာကလည်း သူလိုချင်တာ မပေးရကောင်းလား၊ ဝယ်မလာရကောင်းလား ဆိုပြီး အပြစ်တင်လိုက် နဲ့
နောက်ဆုံး တယောက်နဲ့တယောက် စိတ်မရှည်တဲ့ စကားတွေနဲ့ စကားများ
စိတ်ခံစားမှု နဲ့ အဆုံးသတ်ရတဲ့ရက်တွေသာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ “ပြည်ပရောက် သားသမီးတွေ ဘယ်လို ရုန်းကန်နေရသလဲ” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်မှာ စာရေးသူ ကိုအောင်မိုးဝင်း ဆောင်းပါအပေါ် ကျနော့်ဘာသာ ပေးထားသည့် အမည် ဖြစ်ပါတယ် ... ကိုအောင်)
Posted by ကိုအောင် at 17:390comments
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများထဲမှာ အဆင့် ၁၂ ချိတ်ပါတယ်။ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကတောင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထက် ပိုချမ်းသာနေပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် အဆင့်မကျသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ အစိုးရလူကြီးမင်းများကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ထားပါတော့ဗျာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီလို ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးစာရင်ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုက အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေ၊ တိုက်ခန်းဈေးတွေ၊ ဌားရမ်းခတွေ ကြတော့ ကမ္ဘာထိပ်တန်းမြို့ကြီးတွေက ဈေးနှုန်းတွေထက် မြင့်နေတော့ အံ့သြစရာကောင်းမနေဘူးလားဗျာ။ ဒီလို အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများ ကြီးမြှင့်နေမှုဟာ ဒီနေ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်ဆီချီတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အဓိကအခက်ခဲပြဿနာဖြစ်နေသလို ပြည်သူတွေအတွက်လည်း ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
ယနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်ကြီးမှာ ကျေးလက်နေပြည်သူတွေဟာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွေ မကောင်းလို့၊ လယ်မြေတွေအသိမ်းခံရလို့၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးမှုတွေကြောင့် မြို့ပြသို့ပြောင်းရွေ့နေထိုင် လာမှုသိသာစွာ မြင့်မားလာပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မြို့ကြီးတွေ့မှာရှိတဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးတွေ၊ အိမ်ငှားရမ်းခတွေကြီးမြှင့်မှုတွေဟာ ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေအတွက် ရေနစ်ရာဝါးကူထိုးသလိုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာ ကျောတခင်းစာနေရာရဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် လက်ကောင်းကျေးရွာသုသာန်အား ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဟုဆိုကာ ခြံခတ်သည့်အတွက် နာရေးများ လမ်းဘေး၌ မီးသင်္ဂြိုဟ်နေရ ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်မိတော့ အော်ငါတို့ပြည်သူတွေခမျာမှာ နေဖို့မပြောနဲ့သေဖို့တောင်မလွယ်ပါလားလို့တောင် တွေးမိပါတယ်။
ဒီနေ့ မြို့ပြမှာနထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟာ စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ အထဲမှာ နေရေးက အဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်လ တစ်လ ရရှိတဲ့ လုပ်ခ လစာတစ်ဝက်လောက်ဟာ အိမ်ငှားခ အဆောင်ငှားရခ အတွက်အသုံးပြုနေကြရတော့ ကိုယ်ပိုင်အိမ် ၀ယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ အိမ်မက်တောင် မက်ဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေပါ။ ဒီလို အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေ ၊ အိမ်ငှားခတွေကြီးမြှင့်မှုတွေကြောင့် ကျူးကျော်နေထိုင်မှုတွေ၊ အိမ်မဲ့၊ ယာမဲ့ နေထိုင်မှုတွေဟာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာ တရှိန်ထိုးများပြားလို့နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဧရိယာ အကျယ်အ၀န်းဟာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၂၆၁,၂၂၇ ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ နေထိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ သန်း ၅၀ ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိတော့ တစ်စတုရန်း ၁ မိုင်ပတ်လည်နေထိုင်မှုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ၂၈၇၀ ဦး၊ ထိုင်းက ၃၂၇ ဦး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေအများဆုံးဆိုတဲ့ တရုတ်က ၃၆၅ ဦး အိန္ဒိယက ၉၅၄ ဦး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ၁၈၇ ဦးနဲ့ အနည်းပါ။ ဒီလို အာရှမှာရော ကမ္ဘာမှာပါ မြေအပေါဆုံး လူနေထူထပ်မှု အနည်းဆုံးတိုင်းပြည်က အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းအမြှင့်ဆုံး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ မြေမဲ့ အများဆုံးဖြစ်နေရတာ အံ့သြလို့မဆုံးပါဘူး။
ဒီအကြောင်းစဉ်းစားနေရင်း ပြီးခဲ့တဲ့လက ၀န်ကြီးဟောင်းတစ်ဦးရဲ့သမက်ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့ ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ သူတို့ခြံသွားလည်မလို့ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောတာကနေ စကားစပ်မိလို့ မေးကြည့်မိတာကနေ သိလိုက်ရတာက သူတို့ပိုင်တဲ့ အိမ်တွေ၊တိုက်ခန်းတွေ ၊ ခြံတွေဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း နည်းတာမှမဟုတ်ပဲဗျ။ ရန်ကုန်တစ်မြို့ထဲမှာတင် အိမ် ၅ လုံးလောက်ရှိတယ်။ နေပြည်တော်၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊တောင်ကြီး၊ ကလောစတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးက မြို့ကြီးတွေမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲပါပဲ။ ဒါတောင် အိမ်တွေပဲရှိပါသေးတယ်။ မြေလွတ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေများပေါင်းလိုက်ရင် မြို့အသေးတစ်မြို့စာလောက်တောင် ပိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒါတောင်ဝန်ကြီးသမက်ဆိုတဲ့သူပိုင်တာပဲရှိသေးတယ် ၀န်ကြီးဆိုရင်တော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့။ သူငယ်ချင်းရဲ့ အိမ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေစဉ်းစားမိတော့ “Homeless People and Peopleless Homes” ဆိုတဲ့ စကားလေး သွားသတိရမိတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေက “အိမ်မရှိတဲ့လူနဲ့ လူမရှိတဲ့အိမ်များ” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဖြစ်နေတာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေဈေးတွေ ခေါင်ခိုက်အောင်ဈေးနှုန်းတွေမြှင့်မားနေတာတွေရဲ့ အဓိကတရားခံ သုံးဦးကတော့ အဂတိတရားလိုက်စားတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၊၊ ခရိုနီလူတန်းစားများနဲ့ တိုင်တပါးသားတရုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အဂတိတရားလိုက်စားမှု၊ မတရားသောနည်းလမ်းများ၊ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှု မူးယစ်ဆေးဝါးတို့ရရှိလာသော ငွေမဲတွေကို ငွေဖြူအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုမှု၊ ၀င်ရောက်ဈေးကစားအမြတ်ထုတ်မှုတွေရယ်ကြောင့် အခုလိုမျိုးအဆမတန်မြှင့်တက်ကုန်ရတာပါ။ ဒီနေ့နိုင်ငံတ၀ှမ်းနေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကျုိုးအတ္တအတွက် အိမ်မြေအမြောက်အမြားဝယ်ထားသူတွေရဲ့ ငှားရမ်းခဈေးကစားမှု၊ အိမ်ခြံမြေဈေးဆွဲတင်ကစားမှုတွေကြောင့် အိမ်မပိုင်သူတွေ အိမ်ငှားတွေ အသက်ထွက်မတတ် နေရေးအတွက်လုံးပန်းနေရတဲ့အကြောင်းက အဓိကသက်သေပါပဲ။ လူမနေပဲအိမ်ပိုင်သူလူတစ်စုကလည်း ယခင်အစိုးရ ယခုအစိုးရဆွေစဉ်မျိုးဆက်နဲ့ ခရိုနီအဆက်ဆက်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အိမ်ခြံမြေကို သိန်းပေါင်း သောင်းချီ သိန်းချီတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပေးဝယ်နိုင်တဲ့ သူတွေဟာ သမရိုးကျ သမာအာဇိဝ နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ၀ယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဘိန်းဖြူ၊ ကျောက်မျက်၊သစ် စသည့်တရားမ၀င်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေ၊ မတရားတဲ့နည်းနဲ့ရတဲ့ငွေ၊ အဂတိလိုက်စားပြီးရတဲ့ငွေတွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ လူတိုင်းနားလည်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုများမှာ လုပ်ငန်းရှင်များ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိနိုင်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေရပါတယ်လို့တောင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ဖော်ပြေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီလို တရားမ၀င်ငွေများ ၀င်ငွေလမ်းကြောင်းမပြနိုင်တဲ့ ငွေမဲများဟာ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ တစ်ချက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် WHO ရဲ့ခန့်မှန်းချက်က မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီး ဘိန်းဖြူတန် ၇၈၀ ရှိတယ်တဲ့။ ဒီမူးယစ်ဆေး ရောင်းရငွေတွေဟာ ဘယ်ေ၇ာက်သွားလဲ အရှင်းကြီးပါ။ ရွှေ၊မော်တော်ကား လုပ်ငန်းတွေက ရင်းနှီးမြှပ်နှံလို့မကောင်း စက်မှုနည်းပညာဘက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ကလည်းမစွမ်းကြတော့ “စီးပွားရေးမလုပ်တက် မြေ၀ယ်ထား” ဆိုသလို အားလုံးဟာ အိမ်ခြံမြေဘက်ကိုပဲ ရင်းနှီးမြှပ်နှံကြပြီး ကိုယ်နိုင်ငံသား ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေဆီကပဲ ပြန်စီးပွားရေးရှာနေကြတာပါ။
နောက်အဆိုးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဝယ်အခြေချမှု ဈေးကစားမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ လူဦးရေအဆမတန်များပြားလာမှု၊ ငွေကြေးခ၀ါချမှုတွေကို ထိထိေ၇ာက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်လာမှုတွေကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံကငွေမည်းတွေဟာအိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နယ်စပ်တွေမှာ တရားမ၀င်မှောင်ခိုလုပ်ငန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကြီးပွားလာတဲ့တရုတ်တွေဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င် ၀င်ရောက်ပြီး အိမ်ခြံမြေတွေကို မတန်တဆဈေးနှုန်းတွေပေးပြီးဝယ်ယူမှုတွေကနေ ဈေးနှုန်းတွေ အဆမတန် ကြီးမြှင့်ကုန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်တွေရဲ့ မတန်တဆဈေးနှုန်းတွေပေးဝယ်ပြီး သိမ်းပိုက်လိုက်လို့ မန္တလေး မြို့ကြီးတောင် တရုတ်မြို့ဖြစ်လို့သွားပါပြီ။
ယခုဆိုရင် တရုတ်တွေဟာ မန္တလေးမြို့သာမက မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး မြေယာတွေ အထိန်းအကွပ်မရှိ ၀ယ်ယူနေမှုတွေ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ စီမံကိန်းတခုခု လုပ်မယ်လို့အသံကြားလိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံး ၀င်ရောက်ဝယ်ယူနေသူတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ဟာ တရုတ်တွေရဲ့ ဈေးကစားရာ အမြတ်ထုတ်ရာ ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထားအနေနဲ့ တရုတ်တွေ အိမ်ခြံမြေတွေဝယ်ယူမှုတွေဟာ နည်းတဲ့ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်တော့ပါ။ အခုနောက်ဆုံးရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းတောင် တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးလက်ထဲကို မသိဥာဏ်မဲ့စွာ အပ်နှံဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဆိုတော့ များမကြာမှီအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးတရုတ်လက်အောက် ကျရောက်သွားတော့မှာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လွတ်လပ်ရေးရယူပေးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမယ် မြန်မာပြည်သူတွေခမျာမှာ သူတို့ပိုင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေ လယ်ယာတွေကို အာဏာရှင်တွေ၊ခရိုနီတွေရဲ့ မတရားအသိမ်းခံရမှု တိုင်းတပါးသားတရုတ်တွေရဲ့ လွမ်းမိုးချယ်လှယ်လာမှုတွေကြောင့် ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာတောင် အိမ်မဲ့ယာမဲ့ ကျုးကျော်ဘ၀နဲ့ နေထိုင်အသက်ရှင်နေကြရတာ တွေးမိတိုင်းရင်နာလို့မဆုံးပါဘူး။
ကြားဖူးတာတစ်ခုပါ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင် ပိုက်ဆံအရမ်းချမ်းသာတဲ့ လူတွေဟာ လူအမြဲမနေနိုင်ပဲ အပမ်းဖြေနေထိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံအနှံမှာ အိမ်တွေခြံတွေကို အပို ၀ယ်ယူထားကြပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလို လူအမြဲမနေနိုင်ပဲ ၀ယ်ယူတည်ဆောက်ထားတဲ့ နေအိမ်ခြံတွေကို ၆ လတိတိ လူနေထိုင်တဲ့ အထောက်အထားမတွေ့ရပါက သြစတြေးလျနိုင်ငံသားမည်သူမဆို မိမိအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါက တခါးဖွင့်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခွင့် ဥပဒေကိုပြဌာန်းထားပါတယ်တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုမျိုး ဥပဒေပြဌာန်းပေးဖို့ ဒီနေရာကနေ လွှတ်တော်ကို တောင်းဆိုလိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံပါ။ လူနည်းတစ်စုဖြစ်တဲ့ အာဏာရှင်၊ ခရိုနီတွေနဲ့ တရုတ်တွေပိုင်တဲ့မြေမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုလိုမျိုး အိမ်ခြံမြေတွေကို အာဏာရှင်၊ ခရိုနီနဲ့ တိုင်းတပါးသားတရုတ်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့် လွမ်းမိုးချယ်လှယ်မှုတွေကြောင့် ပြည်သူတွေဒုက္ခကြုံတွေ့နေရမှုတွေကို အစိုးရမှ ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ကိုယ့်မြေကိုယ်ရေကို ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ အပေါင်းပါတရုတ်တွေရဲ့လက်ကနေ ပြန်တိုက်ယူရတဲ့ဘ၀ ရောက်အောင်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ပါရစေလားဗျာ. ..
၉.၈.၂၀၁၄ ထွက် Tomorrow ဂျာနယ်တွင်ပါရှိသည့် ဆောင်းပါး ....
Posted by ကိုအောင် at 16:550comments
IS အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်သူတွေလဲ
IS အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ ဆိုတာက အစွန်းရောက် အစ္စလာမ္မစ်အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ဆီးရီးယား အရှေ့ပိုင်း၊ အီရတ် မြောက်ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်းတလျှောက် နယ်မြေအတော်များများကို သိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများအမြောက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ သာသာရေးလူနည်းစု၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေကို အတင်းအဓ္ဓမ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေ နဲ့ စစ်သားတွေ သတင်းသမားတွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေ အပါအဝင် သူတို့ရဲ့ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကြောင့် ကမ္ဘာတဝန်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့အတူ စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်မှုတွေကို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့်လည်း အမေရိကန်တို့ရဲ့ စစ်ရေး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။
အိုင်အက်စ်ခေါင်းဆောင် အဘူဘာကာ ဘက်ဒါဒီ
အိုင်အက်စ် အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တဦးတည်းသော နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က ရှာရီယာ အစ္စလာမ္မစ်ဥပဒေကို ကျင့်သုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ သူတို့အခေါ် caliphate လို့ ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံကို ထူထောင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ် သူတို့ရဲ့ အင်အားဟာ အီရတ်နဲ့ ဆီရီးယားမှာပဲ ရှိနေပေမယ့် အိုင်အက်စ်တို့က နယ်စပ်တွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဂျော်ဒန်နဲ့ လက်ဘနွန်တွေအထိ သူတို့အင်အားကို ဖြန့်ကျက်ကာ ပါလက်စတိုင်းကို လွတ်မြောက်အောင် လုပ်မယ်လို့ ဂတိပြုထားပါတယ်။
ဒီလို ဂတိစကားဟာ ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုရအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် Abu Bakr al - Baghdadi .အဘူ ဘာကာ အဲ ဘက်ဒါဒီ ကို သစ္စာခံကြဖို့ အိုင်အက်စ်တို့က တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
အိုင်အက်စ် အစ ဘယ်ကလဲ
ဇာကာဝီ စထူထောင်စဉ်ကတည်းက သူတို့ရဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အယ်လ်ကိုင်ဒါးက ဝေဖန်ခဲ့
အိုင်အက်စ်ရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို ခြေရာခံမယ်ဆိုရင် ကွယ်လွန်သူ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသား အဘူ မူဆာဘ် အဲ ဇာကာဝီ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်မှာ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ တော်ဟစ် ဝါအဲ ဂျီဟတ်အဖွဲ့ဟာ အိုင်အက်စ်ရဲ့ အစလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အီရတ်ကို အမေရိကန်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့တွေ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး တနှစ်အကြာမှာ မစ္စတာ ဇာကာဝီဟာ အယ်လ်ကိုင်ဒါး ခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင်ကို သစ္စာခံပြီး အီရတ်မှာ AQI လို့ ခေါ်တဲ့ အီရတ်အယ်လ်ကိုင်ဒါး အဖွဲ့ကို ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့က အဲဒီအချိန်ကစလို့ အီရတ်မှာ နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့တွေကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အဓိကကျတဲ့ အင်အားစု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ ဇာကာဝီ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်မှာ AQI အဖွဲ့ဟာ တခြားအဖွဲ့တွေကို စုစည်းပြီး အိုင်အက်စ်အိုင် လို့ ခေါ်တဲ့ Islamic State in Iraq ( ISI ) အီရတ် အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံအဖွဲ့ ကို ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ အိုင်အက်စ်အိုင်ရဲ့ ရက်စက်မှုတွေကို မကြိုက်ကြတဲ့ ဆွန်နီ အာရပ်မျိုးနွယ်စုတွေက Sahwa ရှဝါကောင်စီဆိုတာကို သီခြားဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာတွေကြောင့် အိုင်အက်စ်အိုင်ရဲ့ အင်အားဟာ တဖြေးဖြေးလျော့နည်းသွားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ အဘူ ဘာကာ အဲ ဘက်ဒါဒီ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သူဟာ အိုင်အက်စ်အိုင်ရဲ့ အင်အားကို ပြန်တည်ဆောက်ယူခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃ နှစ်ကစလို့ အိုင်အက်စ်အိုင်ဟာ အီရတ်မှာ တလကို တိုက်ခိုက်မှုတွေ အတော်များများ ပြန်လုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး အိုင်အက်စ်အိုင်ဟာ ဆီရီးယားက သမ္မတ ဘာရှာ အဲ အာဆတ်ကို ဆန်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ပြီး al - Nusra အဲ နုဆရာ တပ်ဦးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃ ဧပြီလမှာတော့ ဘာဂါဒီဟာ အီရတ်နဲ့ ဆီရီးယားမှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ တပ်တွေကို ပေါင်းပြီး ISIS အိုင်စစ်လို့ ခေါ်တဲ့ အီရတ်နဲ့ လဲဗန့်ဒေသဆိုင်ရာ အစ္စလာမ္မစ် အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
လဲဗန့်ဒေသဆိုတာကတော့ ဆီရီးယား၊ လက်ဘနွန်၊ အစ္စရေး၊ ပါလက်စတိုင်း၊ ဂျော်ဒန်နဲ့ ဆိုက်ပရပ် နိုင်ငံတွေပါတဲ့ ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အိုင်စစ်ဖွဲ့စည်းတာကို al - Nusra အဲ နုဆရာ တပ်ဦးနဲ့ အယ်လ်ကိုင်ဒါး ခေါင်းဆောင်တွေ လက်မခံကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဘက်ဒါဒီကို သစ္စာခံတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အဲ နုဆရာ ကခွဲထွက်ပြီး အိုင်စစ် ဆီရီးယားနိုင်ငံထဲမှာ ဆက်လက်ရှင်သန်အောင် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာလအကုန်မှာ အိုင်စစ်ဟာ အီရတ်ကို ပြန်အာရုံစိုက်ပြီး ရှီအိုက်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရနဲ့ ဆွန်နီအာရပ် လူနည်းစုတွေကြား နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုကို ကောင်းကောင်း အသုံးချပါတော့တယ်။
ဒီနောက်မှာ အိုင်စစ်အဖွဲ့ဟာ မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ အထောက်အကူနဲ့ အီရတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းက ဖါလူဂျာ မြို့ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄ ဇွန်လမှာ အိုင်စစ်တို့ဟာ အီရတ်မြောက်ပိုင်းက မိုဆူးလ် မြို့ကို ဝင်သိမ်းလိုက်ပြီး အဲဒီကနေ တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်ဆီ ရှေ့တိုးချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဇွန်လအကုန်မှာ မြို့ကြီး မြို့ငယ်အတော်များများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အင်အားတွေကိုစုစည်းကာ အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံထူထောင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး သူတို့ အိုင်စစ်အဖွဲ့ကိုလည်း အိုင် အက်စ် အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံအဖွဲ့လို့ အမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
နယ်မြေဘယ်လောက်များများ အိုင်အက်စ်တို့ ထိန်းချုပ်ထားသလဲ
အထူးသဖြင့် အီရတ်က ယာဇီဒီဘာသာရေး လူနည်းစုတွေကို အိုင်အက်စ် ပစ်မှတ်ထားခဲ့
အိုင်အက်စ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ မဟာမိတ်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေဟာ အီရတ်နဲ့ ဆီရီးယားနိုင်ငံပေါင်း စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁၅၀ဝ၀ လောက်ရှိတယ်လို့ တချို့က ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ဒါဟာ အကြမ်းအားဖြင့် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ အရွယ်အစားလောက်ရှိပါတယ်။
တချို့ကလည်း ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အရွယ် စတုရန်းမိုင် ၃၅၀ဝ၀ လောက်လို့ ပြောကြပါတယ်။
သူတို့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေတွေထဲမှာ အီရတ်က မိုဆူးလ်၊တီကရစ်၊ဖါလူဂျာနဲ့ တယ်လ်အာဖါ မြို့တွေ နဲ့ ဆီရီးယားက ရေနံတွင်းတွေ၊ ဆည်ကြီးတွေ၊ အဓိက လမ်းမကြီးတွေနဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်စခန်းတွေရှိတဲ့ Raqqa ရက္ကာမြို့တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အိုင်အက်စ်တို့ရဲ့ အပြည့်အဝ ဒါမှမဟုတ် တစိတ်တပိုင်း ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို ရောက်နေတဲ့ လူဉီးရေက ၈ သန်းလောက်ရှိမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အဲဒီနယ်မြေတွေမှာ အိုင်အက်စ်တို့ဟာ တင်းကြပ်တဲ့ ရှရီယာဥပဒေကိုပြဌာန်းအုပ်ချုပ်နေပြီး အမျိုးသမီးတွေကို အတင်းအကျပ် ခေါင်းမီးခြုံခိုင်းတာတွေ၊ မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူတွေကို အထူးအခွန်ဆိုပြီးဆောင်ခိုင်းတာတွေ ဒါမှမဟုတ် အတင်းအဓ္ဓမ ဘာသာပြောင်းခိုင်းတာတွေ နဲ့ ကြိမ်ဒဏ် သေဒဏ်တွေနဲ့ အပစ်ပေးတာတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။
ဆီရီးယားနဲ့ အီရတ်မှာ အိုင်အက်စ်မှာ ဝင်တိုက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ထောင်နဲ့ချီရှိ
အိုင်အက်စ်မှာ တကယ်တန်း တိုက်ခိုက်နေသူ ၁၅၀ဝ၀ လောက်ရှိမယ်လို့ အမေရိကန်အရာရှိတွေက ယူဆကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သြဂုတ်လအစောပိုင်းမှာ အီရတ်ကျွမ်းကျင်သူ ဟီရှမ် အဲ ဟာရှီမီ Hisham al - Hashimi က ၃၀ဝ၀ဝ ကနေ ၅၀ဝ၀ဝ လောက်အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
ဒီထဲမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းက လောက်ကပဲ အိုင်အက်စ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပြီး တခြားလူတွေကတော့ အတင်းအဓ္ဓမ ဝင်ခိုင်းလို့ ကြောက်လို့ ဝင်ကြရသူတွေလို့ ဆိုပါတယ်။
အိုင်အက်စ် တိုက်ခိုက်ရေးသမားအတော်များများဟာ အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယား နိုင်ငံသားတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ နိုင်ငံပေါင်း ၈၁ နိုင်ငံထက်မနည်းက နိုင်ငံခြားသား ၁၂၀ဝ၀ ကျော် အိုင်အက်စ်မှာ ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြပြီး အဲဒီထဲက ၂၅၀ဝ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်အတွင်း ဆီရီးယားကို လာပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက လူ တွေ ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာပြုစုတဲ့ Soufan Group က လောလောဆယ်ခန့်မှန်းပါတယ်။
သူတို့မှာ ဘယ်လို လက်နက်မျိုးတွေ ရှိသလဲ
အိုင်အက်စ်ဟာ အင်အားအတောင့်ဆုံး ဂျီဟတ်ဒစ်အဖွဲ့တခု ဖြစ်လာ
အိုင်အက်စ် တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာ ထရပ်ကားပေါ် တင်ပစ်လို့ရတဲ့ စက်သေနတ်တွေ ၊ ရော့ကက်လောင်ချာတွေ၊ လေယာဉ်ပစ်သေနတ်တွေ၊ အလွယ်တကူ သယ်ယူပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ မြေပြင်ကနေ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးလက်နက်တွေအပါအဝင် လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်မျိုးစုံကို ရရှိနေကြပြီး ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ အီရတ်နဲ့ ဆီရီးယားစစ်တပ်က တင့်ကားတွေ၊ သံချပ်ကာယာဉ်တွေကိုလည်း သိမ်းဆည်း ရမိထား ကြပါတယ်။
သူတို့ကို လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေ အဆက်မပြတ်အောင် ပို့ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တခုရှိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ဒီလိုလက်နက်စွမ်းရည်တွေကြောင့် သြဂုတ်လမှာ အီရတ်တောင်ပိုင်းက ကာဒ်လူမျိုးပြည်သူ့စစ်စခန်း အတော်များများကို ဝင်စီးခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကို ဘယ်သူတွေက ငွေကြေးထောက်ပံ့နေလဲ
သိမ်းထားတဲ့ နယ်မြေက ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းတာ၊ အခွန်အကောက်တွေနဲ့ ဝင်ငွေသန်းချီ
သတင်းတွေအရ အိုင်အက်စ်မှာ ငွေသားနဲ့ တခြားပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀ဝ၀ လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး စစ်သွေးကြွအဖွဲ့လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အများစုကို အာရပ် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တဉီးချင်း တယောက်ချင်းဆီက ရတာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့အခါမှာတော့ အိုင်အက်စ်ဟာ ကိုယ်ဖါသာ ကိုယ် ငွေကြေးရှာဖွေ ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာနေပါပြီ။
သူတို့ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွင်းတွေကနေ တလ တလကို ဒေါ်လာ သန်းချီ ဝင်နေသလို အခွန်အကောက်တွေ၊ မှောင်ခို အရောင်းအဝယ်တွေ၊ ငွေညှစ်မှုတွေ နဲ့ ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကလည်း ဝင်ငွေတွေ ရနေပါတယ်။
အီရတ်က တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေမှာရှိတဲ့ ဘဏ်တွေကနေလည်း ငွေကြေး အမြောက်အများ ရထားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဘာကြောင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို သုံးကြတာလဲ
ရက်စက်မှုတွေနဲ့ လူတွေကို ထိတ်လန့်အောင်လုပ်
အိုင်အက်စ်တွေဟာ ဆွန်နီ အစ္စလမ်ဘာသာကို အစွန်းရောက်အမြင်တွေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို လက်ခံ ကျင့်သုံးကြတဲ့ ဂျီဟတ်ဒစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး သူတို့ကမှ တကယ်တန်း အစ္စလမ်ဘာသာကို အစစ်အမှန် သက်ဝင်ယုံကြည်သူတွေလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှတ်ယူကြပါတယ်။
သူတို့လွဲပြီး ကျန်တကမ္ဘာလုံးဟာ အစ္စလမ်ဘာသာကို ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာကို မယုံကြည်သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
ဒီလို အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ တခြားမွတ်ဆလင်တွေရော မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူတွေကိုပါ တိုက်ခိုက်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဖြတ်သတ်တာတွေ ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သုတ်သင်တာတွေ နဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်သတ်မှုတွေဟာ ရန်သူကို ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်အောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရမ်ကျမ်းစာပါ ဖေါ်ပြရေးသားချက်အရ မယုံကြည်သူတွေအပေါ် ဒီလို လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ အိုင်အကိစ် အဖွဲ့ဝင်တွေ အကြောင်းပြပေမယ့် မွတ်ဆလင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချကြပါတယ်။
အယ်လ်ကိုင်ဒါးခေါင်းဆောင် Ayman al - Zawahiri အေမန် အဲ ဇာဝါဟီရီကတောင် ဖေဖေါ်ဝါရီလက ဆီရီးယားမှာ လုပ်ခဲ့ အိုင်အက်စ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတာဝန်မယူဘူးလို့ ပြောခဲ့သလို ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်ကလည်း ဒီလိုရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ လေးစားချစ်ခင်မှုကို ဆုံးရှုံးနိုင်တယ် လို့ အဲဒီအချိန်က ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တဲ့ ဇာကာဝီကို သတိပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
Posted by ကိုအောင် at 13:100comments
တကယ်တော့ အမေရိကန်တွေက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေလောက် ဥာဏ်မပြေးပါဘူး။ ဒီ အချက်ကို ခဏခဏ ပြောသူက ကျွန်တော်တို့မြို့က ဒုက္ခသည် လူငယ်တယောက်။ သူက ညနေဆို၊ အလုပ်ပြီးတာ နဲ့ မျက်မှန်အမဲတပ်ပြီး ကမ်းခြေကိုပြေးတော့တယ်။ ကမ်းခြေတလျှောက် ရေကူးဝတ်စုံလေးတွေ ဝတ်ပြီး၊ လှဲလျောင်းနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို တယောက်ခြင်းကြည့်၊ သဘောအကျကြီးကျပြီး၊ ဟိုဘက်ထိပ်၊ ဒီဘက်ထိပ် လမ်းလျှောက်လေ့ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့်၊ သူသဘောမကျတဲ့ အရာတခုကို ရှိတယ်။ အမေရိကန်တချို့ ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ငါးမြှားနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီး သူက ခေါင်းယမ်း၊ အပြစ်တင်ပြီး အားမလိုအားမရ ပြန်လာလေ့ရှိတယ်။
“ အကို- သိလား။ အမေရိကန်တွေက smart မဖြစ်ပါဘူးဗျာ”
“ဟုတ်လား- အေး- ဟုတ်မှာပေါ့ကွာ။ မင်းကတော့ စမတ်ဖြစ်လွန်းလို့ မျက်မှန်အမဲကြီးတပ်ထားတာနေမှာပေါ့”
သူက ဘာမှ ဆက်မပြောဘူး။ “ကျွန်တော် ပစ္စည်းတခုမှာ ထားတယ်ဗျ။ ရောက်လာလို့ကတော့ ဒီကောင်တွေကို လုပ်ပြအုံးမယ်” တဲ့
သူတို့ဘာသာ လုပ်ချင်ရာလုပ် ပြောချင်ရာပြောနေကြတော့ ကိုယ်ကလည်း ဘာမှ ဆက်ပြီး မမေးမိပါဘူး။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ဆိုတော့ သိပ်လည်း မတွေ့ဖြစ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံကနေ သူမှာထားတဲ့ ပစ္စည်းရောက်လာမှ သူဘာလုပ်တယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်တော့တယ်။
သူက ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ငါးဖမ်းသင်္ဘောတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပိုက်ကြီးတခု မှာတယ်။ ( ကွန် လို့ ခေါ်မယ်ထင်တယ်)။ အဲ့ဒီ ပိုက် ကို သယ်ပြီး၊ ငါးမျှားနေတဲ့ ကောင်တွေ နားသွားတယ်။ ငါးမျှားနေတဲ့ အမေရိကန်တွေက သူ့ကို ပြူးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေတာပေါ့။ သူက တကယ့်ကို စံနစ်တကျပါ။ ရေငုတ်ပြီး တိုင်တွေဘာတွေ ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့ ပိုက်ကြီးကို ပစ်ပြီး ငါးဖမ်းတော့တယ်။
မကြာဘူး။ ပိုက်ထဲမှာ ငါးအသေးလေးတွေရော၊ အကြီးကြီးတွေရောပါလာတယ်။
ငါးထိုင်မျှားနေတဲ့သူတွေက သူ့ကို မကျေမနပ်ကြည့်တယ်။ သူကတော့ အပျော်ကြီးပျော်လို့။
“တွေ့လား။ ဒီကောင်တွေ တညနေလုံးထိုင်မျှားနေတာ၊ ပုံးတဝက်တောင်မရဘူး။ ကျွန်တော် ခဏလေး ပိုက်ချလိုက်တာ၊ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ” တဲ့၊ ကောင်လေးက ရင်ကော့ပြီး လမ်းလျှောက်တယ်။ ငါးမျှားသူတွေက ခေါင်းတယမ်းယမ်း နဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်။ ကောင်လေးက ငါးပုံးကြီးကို ကားပေါ်မှာ တင်ပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။
နောက်တနေ့ကျ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ သွားပြန်တယ်။ ငါးမျှားသူတွေက ခေါင်းတယမ်းယမ်းနဲ့ ကျန်ခဲ့ပြန်တယ်။ “ ဒီကောင်တွေ ဒီလောက်လုပ်ပြတာတောင် လိုက်မလုပ်ကြဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီကောင်တွေ smart မဖြစ်ဘူး လို့ ပြောတာပေါ့” တဲ့။ အမေရိကန်တွေညံ့ဖျင်းကြောင်းကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ ပြောနေပြန်တယ်။
ဒီတခါတော့ ပိုက်ချချခြင်းပဲ။ ရဲတွေရောက်လာတယ်။ ငါးမျှားတဲ့သူတွေက ပြုံးကြည့်နေတယ်။
ကောင်လေးကို ကမ်းပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ လက်ထိပ်ခပ်လိုက်တယ်။
“ မင်းငါးမျှားနေတဲ့ နေရာက ဆိုင်းဘုတ် ကို ဖတ်တတ်လား” တဲ့။ ကောင်လေးက ခေါင်းယမ်းတယ်။
တကယ်တော့ ဆိုင်းဘုတ်မှာ “ရေထဲ မဆင်းရပါ။ အပျော်တမ်း ငါးမျှားခြင်း ထက်ပိုသော လှုပ်ရှားမှုများမလုပ်ရပါ” ဆိုတဲ့ စာ ကိုရေးထားတာ။ အဲ့ဒီ ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ သူတို့က ပိုက်သွားချတာကိုး။
သူရော၊ သူ့သူငယ်ချင်းရော၊ သူ့ရဲ့ ငါးပုံးတွေကိုပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလိုက်တယ်။ နောက်-- ရဲစခန်း ပါသွားတော့တယ်။ တကယ်တော့- ဒီက ရေကန်ကြီးမှာ ငါးမျှားကြတယ် ဆိုတာ အပျော်မျှားကြတာ။ အပျင်းဖြေတဲ့သဘော။ ဖမ်းပြီးပြန်လွှတ်ကြတယ်။ တကယ်လို့ ဖမ်းထားတဲ့ငါးကို ယူသွားချင်တယ် ဆိုလည်း အရွယ်အစားသတ်မှတ်ထားတယ် လို့ဆိုတယ်။ သူတို့ ပြောထားတဲ့ အရွယ်ထက် ကျော်ယူလို့မရဘူး။ ကိုယ့်ဆီက ကောင်ကတော့ စီးပွားဖြစ်ကို မျှားတော့တာကိုး။
ရဲစခန်းရောက်တော့ သူ့ကို (၃) ရက်စာ ဒဏ်ရိုက်လိုက်တယ်။ ဒေါ်လာ (၇၀၀၀) တဲ့။
သူ့ကောင်မလေးကတော့ ငြီးရှာတယ်။ “အောင်မလေး ကုန်ပြီ- အရင်ယောင်္ကျားက ကလေးစားစရိတ်အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့ ပိုက်ဆံကို ချေးသွားတယ်” တဲ့။ အမှုနောက်ထပ်တိုးမှာလည်း မသိဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲ လှည့်ပြောနေတယ်။
အခုကိစ္စက အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းလို့။ ဆိုင်းဘုတ် မဖတ်တတ်လို့ မှားတဲ့ ကိစ္စ၊
အင်္ဂလိပ်စာ တတ်တဲ့သူတွေ မှားတဲ့ အမှားက ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။
အမေရိကားကို စရောက်ခါစတုံးက ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ Apartment ဆီကို သူငယ်ချင်းတွေရောက်လာတယ်။ နားနားနေနေ နဲ့ အသားလေးဘာလေး ကင်စား၊ ရေကူးကြမယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ Apartment ရေကူးကန်ကို သွားကြတယ်။ ရေကူးကန်လည်းရောက်ရော အလည်ပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က ရေမကူးတော့ဘူး တဲ့။ အကြောင်းက ရေကူးကန်မှာစောင့်နေတဲ့ Lifeguard ကောင်မလေးတယောက်က သိပ်ကို လှတဲ့အတွက် သူ့ရင်ဘတ်ကို တည့်တည့်ထိသွားတယ် ဆိုပဲ။
သူပြောသလိုပါပဲ။ ကောင်မလေးက ခုံတန်းလေးပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး စာဖတ်နေတယ်။ နှာတံလေးတွေ၊ ပေါင်တံလေးတွေက စင်းလို့။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း တောင့်တောင့်တင်းတင်းဆိုတော့ ရင်ထဲတင်မကဘူး။ သွေးထဲအထိ စိမ့်ဝင် ထိရှလှုပ်ခါ ရှာမှာပေါ့။ ကိုယ်ကလည်း အလည်ပါလာတဲ့သူ့အကြောင်းမသိပါဘူး။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကတော့ သူ့ကို မှာရှာတယ်။ “ ဟေ့ကောင် ကြည့်လုပ်နော်” တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း ရေကူးနေကြတယ်။
မောင်မင်းကြီးသားကလည်း ကောင်မလေးကို ခံစားဖို့ ရေကန်ဘေးက ခုံလေးမှာ ကျန်ခဲ့တယ်။
သတိယလို့ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်အချိန်က Apartment ဆီပြန်သွားပြီး ယူတယ်မသိဘူး။ လက်ထဲမှာ ဂစ်တာနဲ့။ ခင်မောင်တိုးရဲ့ သီချင်းဆိုနေတာ။
“ မင်းရဲ့ မျက်လုံးလေးများက ပုလဲ နဲ့ မဟူရာပေါင်းစပ်ထားသလိုနှယ်။ ကော့ညွတ်သွယ် နှုတ်ခမ်းလေးများက သိတ်လှအောင် ပတ္တမြားသွေးလိမ်းခါချယ် “
ရေကူးကန်ဆီကို ရဲနှစ်ယောက် သေနတ်ပေါ်လက်တင် အသင့်အနေအထားနဲ့ရောက်လာတယ်။
Lifeguard ကောင်မလေး နဲ့ စကားပြောတယ်။ ကောင်မလေးက ဂစ်တာတီးနေတဲ့သူ့ဆီကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ ရဲတွေက သူ့အနားကို ကပ်သွားပြီး ရပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။
တခုခုတော့ဖြစ်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့လည်း နေလို့မရတော့ဘူး။ အပေါ်ကိုတက်ရတော့တယ်။
ဘယ် Apartment ကလဲ တဲ့။ နေရပ်လိပ်စာတောင်းတယ်။ သူ့ဆီက ကဒ်ပြားကိုတောင်းတယ်။
နောက်မှ သိရတာ။မင်းသားက ကောင်မလေးကို တအားသွားငမ်းတယ်။ တည့်တည့်ကနေကြည့်အားမရတော့၊ ပန်းခြံထောင့်ကလေးကနေ သွားငေးတယ်။ နောက်- ဘယ်လိုလှတဲ့အကြောင်း၊ ဘယ်လိုခံစားရကြောင်း၊ ရင်ထဲကို ဘယ်လို ငြိတွယ်မိသွားကြောင်း၊ သူ့ဘာသာ ဗမာစကား နဲ့ တတွတ်တွတ် ရွတ်နေတယ်။ လက်ကလေးကို နှုတ်ခမ်းလေးထဲထည့်ပြီး နောက်ထပ် ထောင့်တထောင့်ကနေ သွားကြွေပြန်တယ်။ ချစ်စိတ်က ပိုပြီးတက်လာတယ်။ ထိန်းမရနိုင်လောက်အောင်ပဲ။
When you takeabreath, I am almost dead တဲ့ ကောင်မလေးကြားအောင် ပြောခဲ့သေးတယ်။
“မင်းအသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါ ငါ သေမတတ် ခံစားရတယ်ပေါ့”
ဒါမျိုးကျ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာ ပီသလားမမေးနဲ့။ အမေရိကန်တွေ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။
ကြွေတယ် ကြွေတယ် ကြွေတယ်။
ရာဘင်နာ နတ်တဂိုး ရဲ့ စာသားတွေ နဲ့ အားမရတော့ဘူး။ ခင်မောင်တိုးသီချင်းစဆိုဖို့လုပ်တော့တယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ မြန်မာပြည်က မိန်းကလေးအဆောင်တွေရှေ့ရောက်နေသလိုမျိုးခံစားရရှာတယ် နဲ့ တူပါတယ်။
ကောင်မလေးခင်ဗျာ- တဘက်သတ် ကြောက်လာတယ်။
“ စိတ္တဇရောဂါရှိမယ် လို့ ထင်ရတဲ့ လူငယ်တယောက် ကျွန်မရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ရန်ရှာဖို့လုပ်နေတယ်။ ကျွန်မရဲ့ လုံခြုံရေးက စိတ်မချရတော့ဘူး” တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ခင်မာင်တိုးသီချင်း စခါရှိသေးတယ်။ ရဲကားရောက်လာတော့တာပဲ။
ဒီမှာက မြန်မာပြည်လို ကောင်မလေးတွေကို ပြောချင်ရာပြော၊ ငမ်းချင်သလိုငမ်းလို့မရဘူးလေ။ လွန်လွန်ကဲကဲ ကြည့်လာရင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် စော်ကားမှု ( Sexual harrashment ) အဖြစ်တရားစွဲလို့ရတယ်။ အခုဟာကတော့ တရားမစွဲပါဘူး။ ကောင်မလေးက သူ့ကို စိတ်ရောဂါရှိနေတယ် ယူဆလို့ အကူအညီပေးတာနဲ့တူပါတယ်။
အော်- ကြုံတုံးပြောလိုက်အုံးမယ်။ အဲ့ဒီ တယောက်ပဲ။ ဟို တလောက မြန်မာပြည်ထဲမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ဆိုပြီး ပြန်သွားလေရဲ့။ ဒုက္ခပဲ။ ခင်မောင်တိုး သီချင်း ဆိုအုံးမှာလား မသိဘူး။
(မှတ်ချက်။ ။ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ “ခပ်လွှဲလွှဲ” ဆိုသည့် စာသားမှာ ကျနော့်ဘာသာ ကျနော် ကိုအောင်မိုးဝင်း ဆောင်းပါးကို ပေးထားသည့် အမည် ဖြစ်ပါတယ် - ကိုအောင်)
Posted by ကိုအောင် at 16:176comments
ရေးသူ- (ကို) အောင်မိုးဝင်း
မြန်မာပြည်က လာတဲ့သူတွေကို ဘာကြောင့် “ ရွှေ” လို့ ခေါ်သလဲ ဆိုတာကို နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်လာမှ ပိုပြီး သဘောပေါက်တော့တယ်။ မိန်းမတွေက ရွှေ တကယ်ကြိုက်တာကိုး။ မကြာသေးမီက ရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်ကောင်မလေးရဲ့ လက်တခုလုံးမှာ ရွှေတွေ တလက်လက်ထနေတယ်။ ဒီလောက်များတာ အတုတွေပဲ နေမှာပါလို့ ထင်နေတာ။ မဟုတ်ဘူး။ အစစ်တွေ တဲ့။ မကြာဘူး။ တလထက် တလ ၊ ကောင်မလေးရဲ့ ရွှေတွေက တံထောင်ဆစ်အထိ ရောက်လာတော့တယ်။
သူတို့ကသာ တဖြည်းဖြည်း ရွှေတွေ အိနေတာ။ ကလေးတွေက ဝမလာဘူး။ အစိုးရက သံသယရှိလာတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ဝင်စစ်တယ်။
အပါးပါး။ မြန်မာဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးတွေ ကလေးတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ နွားနို့၊ Food Stamps တွေကို ကလေးအတွက်မဝယ်ပဲ၊ မြန်မာကုန်စုံဆိုင်မှာသွား၊ ငွေနဲ့လဲ၊ ပြီးတော့ ရွှေဝယ်စုကြသတဲ့။ ကျောင်းသားတယောက်ဖွင့်ထားတဲ့ မြန်မာကုန်စုံဆိုင်ကလည်း သိပ်ပြီး အမြတ်မယူပါဘူး။ ရောက်ခါစ လူဆိုရင် Food Stamp ( ဒေါ်လာ ၁၀၀) ဆိုရင် (၈၀-၈၅ ဒေါ်လာ) နဲ့လဲသတဲ့။ ဒုက္ခသည်တွေ ကားမရှိရင် ကားနဲ့အကြိုအပို့လုပ်ပေးပြီး သူ့ဆိုင်ကို ဈေးဝယ်အောင် လုပ်လေ့ရှိသတဲ့။ ခုတော့- food stamp ကို ငွေ နဲ့ လဲသူရော၊ လဲပေးတဲ့ဆိုင်ရော၊ အစိုးရက ဝင်စစ်တယ်။ ဒဏ်ရိုက်တော့တယ်။ နောက်တခါဆို ထောင်ချမယ်ပေါ့။
ဒါကြောင့် မီးရထားသံလမ်းဘေးက အရွက်လေးတွေကိုခူးစား လို့ ရွာကဓလေ့ပဲ ဆိုပြီး မသနားနဲ့လေ။သူတို့က ကိုယ့်ထက် ချမ်းသာတယ်။
အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ food stamp ကို ကျတော့ ရောင်းစား၊ ရွှေဝယ်စုပြီး၊ လမ်းဘေးက အလေ့ကျပေါက်သစ်ပင်တွေကို နှုတ်စားတာကတော့ အောက်တာပေါ့။
မိန်းမတွေက ရွှေစုလို့ ယောင်္ကျားတွေက ဘာလုပ်တယ်ထင်သလဲ။
ယောင်္ကျားတွေက ရွာမှာနေတုံးက လှည်းတစီးတောင် မပိုင်တာ၊ ဒီရောက်တော့ ကားဝယ်ရင် အသစ်စက်စက်မှ စီးကြတယ်။ ဒီမှာက Learner permit လို့ ခေါ်တဲ့ အမောင်းသင် လက်မှတ်ရှိရင် ကားဝယ်လို့ရတယ် မို့လား။ ဆိုတော့-- မောင်မင်းကြီးသားတွေက ကားအသစ်တစီးဝယ်တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းက သူ့ထက်ကောင်းတာဝယ်ရင်၊ သူကလည်း အားကျမခံ သူ့သူငယ်ချင်းထက် သစ်တဲ့ နောက်ထပ်ကားတစီးသွားပြီး အလဲအလှယ်လုပ် ဝယ်တယ်။ ပြိုင်စရာမရှိတော့ ကားပြိုင်တယ်။ အိမ်ပြိုင်တယ်။
ပထမတော့ ကားရောင်းတဲ့သူက သဘောကျတာပေါ့။
တနှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူး။ နောက်ထပ် ဒေါ်လာ (သုံးထောင်) လောက် ပိုပြီး ထပ်ပေး၊ ကားအသစ်တစီးကို ထပ်ဝယ် ဆိုတော့ သဘောမကျပဲ နေပါ့မလား။ နောက်တော့ တယောက်မဟုတ်၊ ဆယ်ယောက်မဟုတ်၊ ကားကလည်း လဲလိုက်ကြတာ၊ (၄) လ တခါလောက်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တော့ ကားရောင်းတဲ့ဆိုင်က အားနာလာတယ်။
“ မင်းတို့ အဲ့သလို လုပ်နေတာ မကောင်းဘူး။ ကားဆိုတာ အနည်းဆုံး (၁-၂) နှစ်လောက်တော့ စီးရတယ်။ နောက်မှ ပြောင်းကြပေါ့” ပြောလည်း မရဘူး။
“ ခင်ဗျား အမြတ်ရတာပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးနေစမ်းပါ။ ကျုပ်တို့ ပိုက်ဆံ နဲ့ ကျုပ်တို့လုပ်တာ ဘာဖြစ်သလဲ” တဲ့။ ကားရောင်းတဲ့ သူလည်း ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။
ဒုက္ခသည်တွေက ကားရောင်းတဲ့သူတင် အံ့သြအောင် လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။
ရဲတွေကိုလည်း စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်အောင် လုပ်သေးတယ်။
နယူးယောက်အထက်ပိုင်းမှာ မြို့လေးတမြို့ရှိတယ်။ အဲ့ဒီမြို့က လူတွေက (၄၅ မိနစ်- တနာရီ) လောက်ဝေးတဲ့ နေရာတွေမှာ အလုပ်မှာ လုပ်ကြတယ်။
တရက်တော့ လိုတာထက်ပိုတဲ့ အရှိန်နဲ့ မောင်းလာတဲ့ ကားတစီးကို ရဲကဖမ်းလိုက်တယ်။
လိုင်စင်ကို တောင်းကြည့်တော့ Learner permit ပဲ ရှိတယ်။
“ Lerning permit နဲ့ အလုပ်ကို မောင်းလို့မရဘူး။ မင်းကို ဥပဒေအရ၊ ဖမ်းရလိမ့်မယ်”
“ What are you talking about ? ( စောင့်ကြီးအောင့်ကြီးဖြင့် အသံထွက်စေ)
“မင်းဘာတွေလာပြောနေတာလဲ။ လူတိုင်း ဒီလိုပဲမောင်းနေတာ”
“နိုး- ဘယ်ပြည်နယ်မှာမှ ဒီလိုလိုင်စင်နဲ့မောင်းလို့မရဘူး။ မင်းတို့ ဘယ်နိုင်ငံက လာတာလဲ”
“ ငါတို့ မြန်မာပြည်သားတွေကွ။ မင်း- ငါ့တယောက်တည်းကိုပဲ ပြဿနာရှာမယ် မကြံနဲ့နော်။ ဒီလိုင်စင် နဲ့ မောင်းလို့ရတယ် ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ဒီလို လိုင်စင်ကိုင်လို့ ဖမ်းကြေးဆို ငါ့ဘက်ကလည်း သက်သေပြမယ်။ ငါတို့မှာ အုပ်စုရှိတယ်။ မင်းက ငါ့ကို ဖမ်းမယ် ဟုတ်လား။ ရတယ်။ တွေ့ကြသေးတာပေါ့။ ဟော ဟော အခုလာနေတဲ့ ကားကို တားလိုက်”
ရဲက သတိပေးတယ်။ ကိုယ်ထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲ ငြိမ်ငြိမ်နေ။ မရွှေ့နဲ့ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ရဲကလည်း နောက်တစီးကို တားလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီကားမှာလည်း မောင်းတဲ့သူက မြန်မာပြည်က လာတဲ့ ဒုက္ခသည်ပဲ။ လိုင်စင်ကိုတောင်းကြည့်လိုက်တော့ Learning permit
ကောင်လေးက နောက်တစီးကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ မြန်မာပြည်သားတွေပဲ။ လိုင်စင်တောင်းကြည့်လိုက်တော့ Learning permit
နောက် တစီး လက်ညှိုးထိုးတယ်။ ရဲက တားတယ်။ Learning permit
ဒီလိုနဲ့ ကား အစီး (၂၀) လောက်ဖြစ်သွားတယ်။
မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက Learning permit နဲ့ ကားအသစ်တွေဝယ်တယ်။ ကားတိုက်မှု ဖြစ်တယ်။ Insurance တွေက တက်သွားတယ်။ နဂိုက တလမှာ အာမခံကြေး ဒေါ်လာ (၅၀-၆၀) လောက်သာပေးရတဲ့အဆင့်ကနေ တလ ဒေါ်လာ (၂၀၀-၂၅၀) တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
တကယ်တော့ အရင်းရှင်စံနစ်ကြီးထဲမှာ လူတွေ သံသရာလည်နေကြတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေက အစိုးရဆီက တောင်းစားတယ်။ အာမခံ ကုမ္မဏီတွေက ဒုက္ခသည်တွေ ဆီက အမြတ်ရတယ်။ အစိုးရ နဲ့ အာမခံကုမ္မဏီတွေ က အမြတ်ကို ခွဲယူတယ်။ ခံရတာက အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်၊ အခွန်ပေးဆောင်နေရတဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေ။
တကယ်လိုအပ်လို့အစိုးရဆီက ထောက်ပံ့ကြေးယူနေသူတွေကို နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်ကိုလည်း ဂုဏ်သိက္ခာကျအောင်လုပ်၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆီက အခွန်တွေကို လိမ်စားနေတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ တော်တော်လေးစိတ်ပျက်လာမိတာ အမှန်။
(မှတ်ချက်။ ။ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ “ရွှေမမှန်တဲ့ ရွှေ” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်မှာ ကိုအောင်မိုးဝင်း ဆောင်းပါးကို ကျနော့်ဘာသာ ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်- ကိုအောင်)
Posted by ကိုအောင် at 18:014comments
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းသည် ပိဿာချိန် (၁၈,၀၀၀) တန်ချိန်၂၉ ဒသမ ၃၃ တန်သာ ရှိရမည်။ ၂၉၄ တန် လုံးဝမဟုတ်ပါ။
သမိုင်းဆိုတာ ဖျောက်ဖျက်၍ရသော အရာတစ်ခု မဟုတ်သလို သမိုင်းတိုင်းကိုလည်း မြင့်မားတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ပြန်လည်ဆန်းစစ် ဝေဖန်တတ်ဖို့ကလည်း အလွန်လိုအပ်လှပါတယ်။ သမိုင်းဆိုတာ ခေတ်တစ်ခုရဲ့ အမှတ်အသားတွေသာ ဖြစ်သလို ခေတ်တစ်ခုရဲ့ Transition timeline တွေမှာလည်း ဝေခွဲမရနိုင်လောက်တဲ့ Error အမှားတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ယနေ့ မြန်မာပြည်မှာ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းက ရေပန်းစားနေသလို တူးဖော်နေသူတွေကလည်း ပြည်သူတွေကို ပုံပြင်ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ဂမီ မရလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ဆွဲတင်နေကြသလိုလည်း ဖြစ်နေပြီး ပြည်သူတွေကို နိမ့်ကျတဲ့ အတွေးခေါ်နဲ့ အယူမှား၊ အတွေးမှား၊ ကိုးကွယ်မှားအောင် ဂမ္ဘီရ အမှောင်တိုက်သို့ သွေးဆောင်နေသလိုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကို ကမ္ဘာက သိရခြင်းက ၁၅၈၃ စက်တင်ဘာ နောက်ပိုင်းမှာ ဗင်းနစ် (Venence) မြို့သား ကုန်သည် Gaspero Balbi (ဂါးစ်ပါရို) ၏ ခရီးသွားမှတ်တမ်း တစ်ခုကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဂါးစ်ပါရိုရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းကို (Voyage to Pegu, and Observations There, Circa 1583) Gaspero Balbi လို့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ကမ္ဘာ့သမိုင်း သုတေသီတွေက ဓမ္မစေတီမင်းနဲ့ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Gaspero ဟာ သူ ရွှေတိဂုံဘုရား ကုန်းမြင့်ပေါ်ရောက်တော့ ခန်းမလို့ပင် တင်စားလောက်တဲ့ အလွန်ကြီးတဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီးကို တွေ့ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီး အဝန်းက လူသုံးယောက်ဖက်စာလောက် ရှိနေပြီး အမြင့်က ခြေလှမ်းကျဲ ခုနစ်လှမ်းလောက် ရှိမယ်လို့ ခေါင်းလောင်းရဲ့ ကြီးမားပုံကို တင်စားထားခဲ့ပါတယ်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း၏ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှ ယနေ့တိုင် ခေါင်းလောင်း၏ အလေးချိန်ကို ပိဿာချိန် ၁၈၀,၀၀၀ (မက်ထရစ်တန် ၂၉၄ တန်) ရှိတယ်လို့ ခေါင်းလောင်းကို တွင်တွင်တင်စားလို့ နေကြတာတွေကိုသာ တွေ့နေရသလို ဒီကိန်းဂဏန်းတွေက ဖြစ်နိုင်မလား၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူကမှ မတွေးခေါ်ခဲ့ကြပါဘူး။ တကယ်ဆို ဒီကိန်းဂဏန်း တန်ချိန် ၂၉၄ တန် ဆိုတာက လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အဲဒီ ကိန်းဂဏန်းအတိုင်း ခေါင်းလောင်း အလေးချိန်က ရှိနေခဲ့ရင်လည်း အဲဒီဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းက ပဲခူးကနေ ရွှေတိဂုံဘုရားကုန်းပေါ် ဘယ်လိုမှ ရောက်နိုင်စရာ မရှိသလို အပြန်အလှန်အားဖြင့် ရွှေတိဂုံကနေ လက်ရှိ ရှာနေကြတဲ့ မြစ်ဆုံကို မဆိုထားနဲ့၊ ကမ်းနားကိုတောင် ရောက်သွားနိုင်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်လောက်ကို မဆိုထားပါနဲ့၊ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာတောင် တန် ၃၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ဝန်ထုပ်တစ်ခုကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သယ်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ ယနေ့ ဆိပ်ကမ်းမှာသော်မှ ကုန်သေတ္တာ (Container) တန် ၄၀ ကို မ,နိုင်တဲ့ Crane တွေလောက်ကိုသာ ထားရှိသလို တံတားတွေကိုတောင် တန် ၆၀ ဒဏ် ခံနိုင်ရုံလောက်ပဲ ဆောက်ထားကြတာပါ၊၊ ပြီးတော့ ထိုနှစ် ၄၀၀ ကျော်လောက်က Duch တွေက ရွက်သင်္ဘောတွေနဲ့ သွားလာနေကြတာမို့ တန်သုံးရာဝန်ကို တင်ဖို့ဆိုရာမှာ အနည်းဆုံး တန် ၄၀၀ ရှိတဲ့ သဘောမျိုး ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီခေတ်မှာ အောက်ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ ရွက်သင်္ဘောမျိုးတွေလောက်သာ ရှိနေခဲ့တာမို့ တန် ၃၀၀ ကို ဒီလို ရွက်သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ် သို့မဟုတ် နှစ်စင်းတွဲပေါ်ကို ဘယ်လိုမှ တင်ယူနိုင်စရာအကြောင်း လုံးဝမရှိပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း သမိုင်းမှာ ပိဿာချိန် ကိန်းဂဏန်း Error ဧကန် ရှိနေပြီ ဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာ Gaspero ကလည်း ခေါင်းလောင်းရဲ့ အရွယ်အစား ပမာဏကို အဝန်း လူသုံးဖက်မျှ၊ အမြင့် ခြေလှမ်းခုနစ်လှမ်းလောက် ဆိုတာ ခန့်မှန်းရေးသားထားခြင်းသာ ဖြစ်သလို ခေါင်းလောင်းပေါ်က ပိဿာချိန် ၁၈၀,၀၀၀ ဆိုထားရာမှာလည်း ကိန်းဂဏန်း Error ဧကန် ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဆို ကိန်းဂဏန်းက ၁၈၀,၀၀၀ မဖြစ်နိုင်ဘဲ ခေါင်းလောင်းပေါ်က ကိန်းဂဏန်းက ၁၈,၀၀၀ မျှသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ခေါင်းလောင်းပေါ် ကမ္ပည်းထိုးသူက Zero သုံညတစ်လုံး ပိုထုမိသွားတာ ဖြစ်နိုင်သလို ခေါင်းလောင်းပေါ်က ကူးယူသူတို့၏ အမှားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုရှင်းလင်းအောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် ပိဿာချိန် ၆၁၃ ဒသမ ၅ ပိဿာဟာ မက်ထရစ်တန် တစ်တန်နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ဒီတော့ ပိဿာချိန် ၁၈၀,၀၀၀ ကို (၆၁၃ ဒသမ ၅) ပိဿာနဲ့ စားလိုက်ရင် ယခုဖော်ပြနေကြတဲ့ မက်ထရစ်တန်ချိန် ၂၉၃ ဒသမ ၃၉ တန်ကို ရပါတယ်။ တစ်ခါ ပိဿာချိန် ၁၈,၀၀၀ ကို ၆၁၃ ဒသမ ၅ နဲ့ စားမယ်ဆိုရင် မက်ထရစ် တန် ၂၉ ဒသမ ၃၄ တန်ကို ရပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီခေါင်းလောင်းရဲ့အလေးချိန် အမှန်က အထက်ပါ ၂၉ ဒသမ ၃၄ တန်ပဲ ဖြစ်နေရမှာပါ။ အဲဒီလို တန် ၃၀ သာ ရှိနေခဲ့တာမို့ DeBrito (ငဇင်ကာ) အလွယ်တကူ ခိုးယူနိုင်ပြီး ပုဇွန်တောင်ချောင်းအထိ ဆင်နဲ့ ဆွဲနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ Duch သင်္ဘောနှစ်စင်းကို ယှဉ်ပြီး တင်သွားနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် သူ့သင်္ဘောနှစ်စင်းက ဒီတန် ၃၀ မျှကိုတောင် မနိုင်ဝန်ထမ်းရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားတာမို့ အဲဒီ သင်္ဘောနှစ်စင်းလုံး မှောက်သွားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျွန်တော် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စိန်ခေါ်ပြီး ပြောနိုင်တာက ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဟာ လက်ရှိ ဖော်ပြနေကြတဲ့ ပိဿာချိန် ၁၈၀,၀၀၀ (၂၉၄ တန်) လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း၊ ခေါင်းလောင်းက ပိဿာချိန် ၁၈,၀၀၀ မက်ထရစ်တန် (၂၉ ဒသမ ၃၄) တန်သာ ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ကြေညာအပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှ မည်သည့်ပညာရှင်နှင့်မဆို ယှဉ်ပြိုင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အာခံချက် ပေးထားပါတယ်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဟာ Duch ကုန်သည် ခရီးသွားမှတ်တမ်းအရ ခေါင်းလောင်းအဝ ကျယ်လွန်းနေလို့ out of bell shape ဖြစ်နေနိုင်သလို Thickness (အထူ) က ပုံမှန်ရှိသင့်တာထက် ပါးနေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူတွေ ပြောနေသလို မီးကျောင်းနက္ခတ်နဲ့ ထုလို့ အသံမထွက်ဘူး၊ အသံမမှန်ဘူး ဆိုတာကလည်း နက္ခတ်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်မှာ ဖော်ပြထားသလို out of bell shape ဖြစ်နေပြီး အထူအပါး မညီတာရယ်ကြောင့် ရွှေ+ကြေး+ငွေနဲ့ သံ Alloy metal တွေကို စပ်တဲ့နေရာမှာ Ratio အချိုးအစား စံမညီမျှခဲ့ရင် အဲလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ခေါင်းလောင်းဟာ တန် ၃၀ မျှသာ ရှိနေပြီး နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမို့ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ခေါင်းလောင်းဟာ မြစ်ရေအောက်မှာ အနည်းဆုံး ပေ ၂၀ အောက် မြေကြီးထဲကို နစ်မြုပ်ဝင်သွား နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တည်နေရာအမှန်ကို ဘယ်သူမှ အတိကျသိနိုင်မှာ မဟုတ်တော့သလို ခေါင်းလောင်းတင်သွားတဲ့ သင်္ဘောနှစ်စင်းကလည်း သစ်သားသင်္ဘောတွေပေမို့ နှစ် ၄၀၀ ကြာသွားပြီမို့ သင်္ဘောတွေကိုလည်း အလုံးလိုက် တွေ့နိုင်စရာအကြောင်း မရှိတော့ပါဘူး။
လက်ရှိ ရှာဖွေနေတဲ့အဖွဲ့ဟာ ဆလုံ ၁၀ ယောက်လောက်ကို ငုပ်ရှာခိုင်းတယ် ဆိုကတည်းက သူတို့ဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့ နက်ရှိုင်းမှု မသိနားမလည်ကြသလို ဘိုးတော်ဦးစီးတဲ့ အဖွဲ့မျိုးလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လွယ်လွယ်နဲ့ အာမခံချက်တွေ လျှောက်ပေးခဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း အဖျားရှူးသွားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ အရင်အစိုးရ အကူအညီတောင်းလို့ အင်္ဂလိပ်ရေကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင် Mr.Mike Hatcher ဦးစီးတဲ့ အဖွဲ့က ၂၀၀၁ ခုနှစ် မတ်လကစပြီး ခေတ်မီကိရိယာတွေနဲ့ under water ground survey ကို ကိုးလတိုင် လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း သူတို့က မသိသလို နောက်ဆုံး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ရောက်မှ Damien Lay ရဲ့ စီမံကိန်းမှာ side scan Sonar survey ကို မြစ်ရေအောက် မြေကြမ်းပြင် (လေးကီလိုမီတာ) ပတ်ပတ်လည်ကို ခေတ်မီ ရေငုပ်ဝတ်စုံ ရေငုပ်သမားများနှင့် Survey လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း သူတို့ မသိကြသလို ၂၀၁၂ ဇွန်မှာလည်း ရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာနနဲ့ စင်ကာပူက SD Mark International LLP Co. ကုမ္ပဏီတို့က ခေါင်းလောင်း ပြန်လည်ရှာဖွေရေးအတွက် USD 10 million အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဆယ်သန်းကို မတည်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါသေးတယ် ဆိုတာတွေကိုလည်း သူတို့မသိခဲ့ကြပါဘူး။
ဒါတွေကို မလေ့လာဘဲ လက်ရှိ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ဘိုးတော်တွေ ပြောတဲ့အတိုင်း သတင်းမီဒီယာတွေ လျှောက်ပြော၊ စာရွက် လျှောက်ဝေတာမျိုးတွေကို လုပ်နေခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်တော့ ဒီခေါင်းလောင်းကို တွေ့သည့်တိုင် ခေတ်မီသိပ္ပံနည်းပညာတွေ မရှိဘဲ ဒီခေါင်းလောင်း အပေါ်မရောက်နိုင်သလို လက်ရှိအဖွဲ့က တူးဖော်ခဲ့ရင် ခေါင်းလောင်း ပျက်စီးသွားရုံကလွဲလို့ ဘာမှဖြစ်လာစရာ မရှိပါဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ တိုင် စွတ်စိုတဲ့ မြစ်ရေအောက်မှာ ရှိနေတဲ့ Alloy Metal အကောင်းပကတိ မရှိနိုင်ပါဘူး။ Alloy မှာ သံပါနေတာမို့ အဲဒီခေါင်းလောင်းမှာ ဆန်ခါပေါက်တွေ ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်သလို ထိလိုက်တာနဲ့ ကြွေသွားမှာပါ။ ဒါတွေကို လက်ရှိအဖွဲ့က ဘာမှမသိကြဘဲ ဆလုံတွေ ခေါ်ငုပ်ခိုင်းပြီး တွေ့တာနဲ့ ကရိန်းနဲ့ ဆွဲတင်လို့ ရမယ်လို့ လွယ်လွယ်ထင်နေခဲ့ကြတာပါ။ အချိန်ရဲ့ နက်ရှိုင်းမှုနဲ့ မြစ်ရေအောက် သဘာဝအပြင် သစ်သားတစ်တုံးက ရေအောက်မှာ နှစ်လေးရာ ကြာသွားရင် ဘယ်အဆင့်ကို ရောက်နေမယ်ဆိုတဲ့ သုတတွေလည်း မရှိတာမို့ ယခုလို လွယ်လွယ်လျှောက်ပြောပြီး ပြည်သူတွေကို နတ်မှိုင်း၊ ဘိုးတော်မှိုင်းတွေကို တိုက်နေကြပြီး ကိုးကွယ်မှုတွေ မှားအောင် ဖန်တီးနေကြသလိုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ပြည်သူတွေမှာ အတွေးအခေါ်တွေ နိမ့်ကျလာနေရင် ကိုးကွယ်မှုတွေ မှားလာပြီး တဖြည်းဖြည်း လူမျိုးရေးတွေကိုပါ ကျဆင်းလာစေနိုင်သလို ပြည်သူတွေကို အတွေးအခေါ် နိမ့်ကျအောင်၊ ကိုးကွယ်မှု မှားအောင် ဖန်တီးသူတွေကလည်း နံပါတ်တစ် အမျိုးသားရေး ရန်သူတွေလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
-ဘဲလားလေဘာတီ (Astro-Political Scientist)
Posted by ကိုအောင် at 22:053comments
နိုင်ငံတော် အကျဉ်းသား စာအုပ်
တရုတ်ပြည်ကြီး တိုးတက်မှုအကြောင်းပြောတိုင်း တိန့်ရှောင်ဖိန် တယောက်တည်းကိုပဲ အမှတ်ပေး ခြီးမွန်းလေ့ရှိကြတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကျဉ်းသား ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ တရုတ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အဓိကဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း အပါအဝင် တီယင်မင်လူသတ်ပွဲအထိ စိတ်ဝင်စားစရာအပြည့် ။
ဒီစာအုပ်က ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဝါဒဖြန့်စာအုပ်မဟုတ်တော့ ဖတ်လို့ပိုကောင်းပါတယ်။
တကယ်တော့ တိန့်ရှောင်ဖိန်က စီးပွားရေးဦးမော့လာဖို့အတွက် ဝန်ကြီးချုပ် ကျောက်ကျိယံကို အားကိုးခဲ့တယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးအတွက် မဟာဗျူဟာကျကျလှမ်းဖို့ ကျောက်ကျိယံကို ဦးဆောင်စေချင်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ နီးစပ်စေခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် တီယင်မင်ရင်ပြင် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ လူသတ်ပွဲတွေက ကျောက်ကျိယံနဲ့ တိန့်ရှောင်ဖိန် နှစ်ယောက်ကြားမှာ အကြီးအကျယ် ကွဲအက်စေခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျောက်ကျိယံတယောက် ရာထူးက ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတယ်။
နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေကို ခဏထား။
တရုတ်စီးပွားရေး ဖေါ်ဆောင်မှုအယူအဆ ကို ပြောကြည့်ရအောင်
တရုတ်က ဈေးကွက်စီးပွားရေး လုပ်ယုံတင်မကဘူး
အရင်းရှင်တွေကို ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် ပေးပစ်တယ်
အဓိက ကတော့ ကွန်မြူနစ်နဖူးစီးတပ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ခိုင်းတာ
ကားလ်မာ့က်စ် ပြောသလိုမျိုး လိုက်လုပ်ရင် ကျန်တဲ့ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေလို
ဒုက္ခရောက်တော့မယ်။ ငတ်တော့မယ် ဆိုတာ သိတယ်။
ဒါ့ကြောင့် တရုတ်နည်းတရုတ်ဟန် အရင်းရှင်စံနစ်ဆီကို တရွေ့ရွေ့ပြောင်းတယ်
တရုတ်အရင်းရှင်စံနစ်က အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ စီးပွားရေးဖေါ်ဆောင်မှု
ဒါပေမယ့် ကွန်မြူနစ်ခရိုနီတွေအပေါ် အခွင့်အရေးတအားပေးထားတယ်။
ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မိန်းမတွေက စိန်ကုန်သည် ကျောက်မျက်ရတနာဋ္ဌာန အကြီးအကဲတွေ။
လူတန်းစားညီမျှမှု၊ ကွန်မြူနစ် ဘာညာပေါ့
ဒါပေမယ့် တရုတ်သွားနေတဲ့လမ်းက အရင်းရှင်အာဏာရှင်စံနစ် ပါ။
အာဏာရှင်တွေကို ထောက်ခံပေးပြီး ဆရာမွေးတပည့်မွေးလုပ်ပြီး စီးပွားရှာတော့တယ်။
ကွန်မြူနစ်အတွေးအခေါ်ထက် ငွေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ပိုဇောင်းပေးခဲ့ကြတော့ စီးပွားဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Posted by ကိုအောင် at 17:112comments
ဆရာ ဘဲလားလေဘာတီ ရဲ့ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း နဲ့ ပတ်သက...